Home Wararka Fashilka Rooble: Hadii ninkii dilka Ikram loo haystay dalka loo diiday, yaa...
Fashilka Rooble: Hadii ninkii dilka Ikram loo haystay dalka loo diiday, yaa dambiga la saarayaa?
Dad badan ayaa is-weydiinaya xigmada ka danbeyn karta in loo diido in uu dalka soo galo shaqsigii loo haystay danbiga dilka Ikram Tahliil. In mudo ah ayaa RW Rooble waxa uu umadda Soomaaliyeed u sheegayay in uu raadinayo cadaalada Gabadha Ikram Tahliil oo la’la yahay mudo dhowr bilood ah.
RW Rooble ayaa amray in hay’adaha dowlada ay baaritaan ku sameeyaan dilka Ikram iyada oo tuhunku yahay in dilkaas uu ka danbeeyeen Fahad Yaasin iyo saaxiibadiisa. Hadaba ma aha wax caqliga galaya in xukumada Rooble ay si toos ah isku hor-istaagto safarka Fahad Yaasin.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa baahi xoogan u qaba in Fahad Yasin la maxkamadeeyo, si taasi u dhacdana waa in uu dalka dib ugu soo noqdo. Talaabada uu qaaday Ra’iisal Wasaare Rooble iyo koxa la taliya ayaa noqon doonto mid keenta in isaga iyo kooxaha ku hareereysan loo eedeeyo inay lug ku leeyihiin qarinta ama daboolida dilka Ikram Tahliil.
Waalidka dhalay Ikram Tahliil waxa ay doonayaan cadaalad iyo in maxkamad la horkeeno cidii ka danbeeysay dilka gabadhooda? Marnaba caqli ma aha in RW Rooble uu qaato go’aano keeni kara in qoyska Ikram ayan helin Cadaalada ay u ooman yihiin.
Talabadaan iyo kuwa kale oo qaldan uu qaatay Rooble ayaana keentay in beesha Caalamka ay ka gabasadaan, isla markaana kalana noqdaan teegeeradii ay horay u siiyeen RW Rooble.